मुसहर पशुले झैँ घोप्टिएर पानी पिउँछन । — Cyber Headline
मुसहर पशुले झैँ घोप्टिएर पानी पिउँछन ।
सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका , वडा नं. ७ मुराबारीका मुसहर पशुले झैँ भाँडोमा घोप्टिएर पानी पिउँछन् । बतहा खोला किनारको खाल्डोमा जमेको पानी २७ परिवार मुसहरको जीवनको स्रोत हो । जहाँ गाउँका धनीमानीले दिसा गर्छन्, भैंसीलाई नुहाइदिन्छन्, तर गरिब मुसहर त्यही पानी पिउँछन्।
खाल्डोमा जमेको पानी भाँडोमा भरेर घर ल्याउँदा पनि लेदो उस्तै हुन्छ । पानी पिउनेजस्तो बनाउन उनीहरूले थिग्र्याउँछन् । तर, गिलास अथवा कचौरा हल्लियो भने लेदो जस्ताको तस्तै हुन्छ । त्यसैले कचौरा भुइँमै राखेर घोप्टिएर पानी पिउन बाध्य छन् उनीहरू । १२ वर्षीया बबिता सदा खाल्डोबाट पानी उघाउँदै हुन्छिन् ।
उनकै घरछेउमा उनी घोप्टी परेर पानी पिछिन । बबिता मात्र होइन, गाउँका सबैका लागि यो बाध्यता हो । पानीको स्रोतमा भैंसी आहाल बस्न नदिन र दिसा-पिसाब नगर्न आग्रह गर्दा गाउँका धनीमानीले उल्टै गाली गर्ने गरेको मुसहरहरू बताउँछन् । सरकारले जसलाई उपेक्षा गर्छ, गाउँका ठालुले अवहेलना गर्छन्, अशिक्षित-उत्पीडित उनीहरूको विषयमा अब बोलिदिने कसले ?
इलेक्ट्रोनिक्स पसल र औषधी पसलमा ...